Uthotho lweVPF oluthe nkqo kwipleyiti yesikhenkcisi, iTshayina VPF uthotho oluthe nkqo kwipleyiti yesikhenkcisi Abavelisi, ababoneleli, iFactory-Square Technology Group Co., Ltd.
Ipleyiti emileyo ethe nkqo ilungele ukuhanjiswa ngokukhawuleza kweebhulorho ezahlukeneyo zokutya, ezinjengentlanzi, umhlakulo, iimveliso zenyama, ukutya kwezilwanyana, njl. Njl. Isetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi njengokucocwa kokutya kwaselwandle, ukuloba kude nonxweme, ukulungiswa kwenyama kunye nezilwanyana zasekhaya ukugcinwa kokupholisa ukutya.
Ukulayisha ngokukhawuleza nokukothula. Ngokungafaniyo nesikhenkcezisi esithe tyaba esifuna umntu
Umsebenzi ukupakisha imveliso kwiitreyi, abasebenzi banokuyigalela phantsi imveliso yesambuku
ngqo kwisithuba esiphakathi kwamacwecwe. Emva kokuba imveliso ingumkhenkce, iibhloko ezinqabileyo ziya kuthi
Ukuphakanyiswa kwamacwecwe ngeefolokhwe zokubamba ngamanzi.
◆Isikhenkcezisi esime nkqo sisebenzisa umbane ngamandla ngenxa yexesha elifutshane lokuqandisa.
◆Isakhelo senziwe ngamanzi olwandle ahambelana neshushu esishushu. Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
isakhelo sikwafumaneka njengokhetho.
◆Umphezulu weplate ugudile kwaye ifolokhwe ifakwe iPTFE ukuthintela imveliso
umonakalo okanye ukukrwela.
◆Ifriji inokusebenza neFreon, iAmonia okanye i-CO2.
* Ubushushu obukhuselweyo: + 15 ℃, ubushushu obukhuselweyo: -18 ℃, ubushushu obugqithisile: -35 ℃, ixesha lokuqandisa elisekwe kwiintlanzi ezipheleleyo
Isikhenkcezisi esime nkqo sisetyenziselwa ukukhenkca iimveliso kwiibhloko kwiinqanawa zokuloba okanye emhlabeni. Kukulungele ukutya okuninzi njengentlanzi, inyama kunye nemifuno, okanye ukutya okungamanzi njengejusi, ubisi, umgubo njl.